KABESON’NY MPANJAKA TOERA : Hirosoana ny dingana faharoa amin’ny tetikasa fampodiana azy an-tanindrazana – Free News
Accueil/Kolontsaina/KABESON’NY MPANJAKA TOERA : Hirosoana ny dingana faharoa amin’ny tetikasa fampodiana azy an-tanindrazana
KABESON’NY MPANJAKA TOERA : Hirosoana ny dingana faharoa amin’ny tetikasa fampodiana azy an-tanindrazana
Nisy ny fivoriana ara-teknika mikasika ny tetikasa fampodiana ny Kabeson’ny Mpanjaka Sakalava Toera tao amin’ny Musée de l’Homme- Museum National d’Histoires Naturelles, Paris Frantsa, omaly. Nivoitra tao anatin’izany fa efa miroso amin’ny dingana faharoa izao ny tetikasa fampodiana ity kabeson’ny Mpanjaka Toera ity.
Noraisin’ny Talen’ny Musée sy ny mpiara-miasa aminy omaly alarobia maraina ny delegasiona malagasy notarihin-dRamatoa minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo. Fivoriana ara-teknika nanazavana ny dingana rehetra mbola hatao ao anatin’ny tetikasa fampodiana ny Kabeson’ny Mpanjaka Toera no natao. Efa vita tanteraka ny dingana voalohany rehetra izay efa nahitana fahombiazana hatreto, dia ny fakana singa ADN avy amin’ny taolambalon’ny Mpanjaka taty Madagasikara sy avy amin’iray amin’ireo Kabeso izay heverina fa an’i Mpanjaka Toera, tehirizina ao amin’ny Musée de l’Homme Paris, Frantsa.
Hiditra amin’ny dingana faharoa ankehitriny ireo mpikaroka siantifika ao amin’ny Musée de l’Homme dia ny fitrandrahana ireo singa ADN ireo, mba hahafahana miroso amin’ny dingana fahatelo farany dia ny fampitahana ireo singa ADN eo am-pelatanana mba hahazoana antoka tsara fa tena ny Kabeson’ny Mpanjaka Toera tokoa no hampodiana aty Madagasikara.
Pitsopitsony araka ny lalàna
« Manantena hahazo valiny miabo amin’ireo karoka ara-tsiantifika mbola atao ireo ny roa tonta, na dia sarotra sy avo lenta tokoa aza izay asa mbola hatao izay ho an’ireo mpikaroka ara-tsiansa ao amin’ny Musée de l’Homme ireo », hoy ny fampitam-baovao. Marihina fa mbola misy koa ny pitsopitsony, araka ny lalàna frantsay, tsy maintsy arahina ao anatin’izay tetikasa fampodiana ny Kabeson’ny Mpanjaka Sakalava Toera izay, saingy mahatsapa tsara ny maha zava-dehibe an’izay tetikasa izay na ny andaniny na ny ankilany, amin’ny maha fampanantenana nataon’ny Filohan’ny Repoblika Malagasy, Atoa Andry Rajoelina azy, sy ny lanja ara-tantaran’izany dingana goavana izany ho an’ny vahoaka Sakalava rehetra manerana ny Nosy. Milofo amin’ny fanatanterahana ny asa rehetra mifandraika amin’izany ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina ankehitriny, araka ny fanazavana.
ANTONTANISA COVID-19: 295 ireo tranga voamarina tao anatin’ny herinandro
AKANY ZANDARIMARIA ARIVONIMAMO : Nankasitrahana ireo ankizy kamboty afa-panadinam-panjakana
FAMPIROBOROBOANA NY INDOSTRIA: Notokanana ny ozinina mpamokatra lafarina ao Toamasina
VELIRANON’NY FILOHA : Eny Tsimahabeomby Imerintsiatosika no hametrahana ny tanàna vaovao